Nneɛma abien bi a ɛpaee wɔ Beirut kurow no mu – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Nneɛma abien a ɛpaee, a nea ɛto so abien no sõ sen nea edi kan no koraa no, bɔɔ Beirut kurow no mu Yawda anwummere anɔpatutuutu, na anyɛ yiye koraa no, ekunkum nnipa 154, na epirapira bɛboro 5,000 na ɛsɛee nneɛma pii. Sɛnea Lebanon akwahosan soafo, Hamad Hassan, kyerɛ no, wɔde nnipa bɛboro 1,000 akɔ ayaresabea, na na 120 da so ara wɔ tebea a emu yɛ den mu Fida.
Ɔpae a ɛto so abien no maa ahurututu bi a ɛyɛ kɔkɔɔ a ɛrehuruhuruw kɔɔ soro wɔ kurow no hyɛn gyinabea no atifi na ɛmaa asorɔkye bi a ɛyɛ hu bae a ɛbubuu ahwehwɛ akwansin pii. Ɛmfa ho adwuma kɛse bi a wɔhwehwɛ mu no, wɔda so ara gye di sɛ nnipa du du pii ayera wɔ kurow a ɛyɛ Lebanon ahenkurow a ɛwɔ Mediterranea mpoano apuei fam no mu.
Bere a atumfoɔ no reboaboa nea esii no ano no, ɛha na yɛahwɛ nea yenim ne nea yennim.
Dɛn na ɛde nneɛma a ɛpaee no bae?
Wonnya nhuu nea ɛde ba ankasa, nanso ogya bi sɛee hyɛn gyinabea bi adekoradan bi bɛyɛ 6 p.m. Ná nneɛma abien a ɛpaee, ketewaa bi a ɛpaee kɛse bi a ɛsɛee kurow no fã bi dii akyi wɔ sikani kakraa bi akyi.
Tags: adiyisɛmakiraanimearabarabicawurade ɔtopae awudibakugobakugoubeirutbeyrouthbnhaboku no ɔkokodurufo adesuaboomcedardekudubaiegyptemiratesfairouzfɛfɛɛfɛhabibiiraqizukujapanjordankacchankasakatsukikatsuki bakugoukonosubakɔkɔɔkurowkuwaitlebanonmangame ɔbran adesuameguminmfinimfini apueimhamidoriyamorocconkyerɛweennwomnostalgiansɛm a wɔafa akaogyaɔbranɔtopaeqatarretrosaudi arabiaserewsyriatumi nyinaatypographyuaevintage
Next У місті Бейрут прогриміла пара вибухів
Previous Beýrut şäherine bir jübüt partlama boldy